कोरियामा अवैधानिक कामदारमाथिको धरपकड तीव्र
काठमाडौं । दक्षिण कोरियास्थित अध्यागमनका कमचारीले लुकीछिपी बस्ने विदेशी कामदारको खोजी र पक्राउ गर्ने काम तीव्र पारेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ । अहिले धमाधम कोरियाका विभिन्न स्थानबाट..
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जागिर खुल्यो (विज्ञापनसहित)
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले विभिन्न पदमा जागिर खोलेको छ । बैंकले बुधबार सरकारी दैनिक गोरखापत्रमा जागिरसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ । दरखास्त बुझाउन अन्तिम मिति भदौ ५ सम्म तोकिएको छ..
नेपाल वायुसेवा निगमका ८ मध्ये ६ जहाज थन्किए, निगम अप्ठ्यारो अबस्थामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमका आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने ८ मध्ये ६ वटा जहाज उड्नै नसक्ने गरी थन्किएका छन्। आम्दानीको मुख्य माध्यम जहाज नै थन्किएपछि निगम अहिले अप्ठेरो..
किन ठगिदैछन् मलेसिया जाने युवा ? हरेक कामदारसँग दश हजार असुल्छन् विचौलिायाहरु
काठमाडौँ । बिचौलियाको चलखेल र सरकारी उदासीनताका कारण मलेसिया जाने नेपाली कामदारले प्रतिव्यक्ति झन्डै १० हजार रुपैयाँ बढी शुल्क तिर्न परिरहेको छ । भिएलएन नेपाल, बायोमेट्रिक, माईग्राम, आइसिएसजस्ता संस्थामार्फत कामदारमाथि थप..
​मजदुरको तलब शतप्रतिशत वृद्धिको माग, नभए आन्दोलन
काठमाडौँ । श्रमजीवी ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपालले श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपक बोहरालाई श्रमिकको तलब शतप्रतिशत बढाउनुपर्ने माग गर्दै १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा बजेटले कर्मचारीको तलब भत्तामा २५ प्रतिशत..
मनसुनसंगै कैलालीको नदीमा डल्फिन देखिन थाले
कैलाली । कैलालीका कर्णाली नदी, त्यसका भँगाला र कर्णालीमा मिसिने मोहना नदीमा यसवर्ष असारमै डल्फिन देखापर्न थालेका छन् । दिनहुँजसो लगातार वर्षा भैइरहँदा नदीमा पानीको बहाव बढेपछि यस वर्ष असारमै..
अहिले अधिकांशको जागिर कम्प्युटरमा घन्टौसम्म बसेर काम गर्ने हुन्छ । तपाईं पनि प्रोफेसनल व्यक्ति हुनुहुन्छ र लामो समय कम्प्युटरमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने सबैभन्दा बढी दबाब आाखामा परिरहेको हुन्छ..
​गोदाम व्यवस्थापन लिमिटेडमा सरकारी जागिरको अवसर, एसएलसी उर्तिणले पनि आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं । नेपाल सरकार अन्तरगतको नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्थापन लिमिटेडमा विभिन्न पदमा जागिर खुलेको छ । ५ प्रशासकीय अधिृकत र ४ लेखा अधिकृतसहित ३५ पदमा दरखास्त खुलेको हो । कम्पनीले..
​पर्यटनलाई प्रविधिसँग जोड्न ई-भिलेज केन्द्र सञ्चालनमा
पोखरा । सूचना प्रविधि विभागको सहयोग एवम् हाई वन होप सामुदायिक पुस्तकालय, भरतपोखरीको संयोजनमा लेखनाथ नगरपालिका-१८ बर पाण्डेथुममा हाई वन होप ई-भिलेज केन्द्र आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ । सूचना प्रविधिको पहुँचबाट..
उपत्यकामा तीन तहमा सवारीसाधन सञ्चालन हुने
काठमाडौं । सरकारले ‘मास ट्रान्सपोर्ट’लाई प्राथमिकता दिने गरी हाल काठमाडौं उपत्यकामा कायम रहेको करिब २ सय सवारी रुटलाई ६६ वटामा सीमित पार्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी..
लगानी बोर्डको सिईओमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त, को हुन अधिकारी ?
काठमाडौं। सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा महाप्रसाद अधिकारीलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ। बिहिवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई लगानी बोर्डको सिईओ नियुक्त गरेको हो। दश अर्व रुपैयाँभन्दा बढी..
रोजगारीका लागि अफगानिस्तान, सिरिया र लिबिया जान प्रतिवन्ध
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानसहित सिरिया र लिबियामा जान रोक लगाएको छ । अफगानिस्तानको राजधानी काबुल विस्फोटमा १३ नेपालीको मृत्यु भएपछि सरकारले यो कदम चालेको हो । बिहीबार..
आयल निगममा जागिर खुल्यो, एसएलसी पासलाई पनि अवसर
काठमाडौं । नेपाल आयल निभगले विभिन्न पदमा कर्मचारी भर्ना गर्न दरखास्त आवेदन माग गरेको छ । आयल निगमले एक विज्ञापन प्काशित गर्दै विभिन्न ६२ पदमा जागिर खुलाएको हो । मेकानिकल र..
एउटै म्यानपावर विरुद्ध ११५ वटा ठगिको उजुरी, कुन म्यानपावरले कति ठगे ?
काठमाडौं । पछिल्लो आठ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको सबैभन्दा बढी उजुरी महाराजगञ्जमा रहेको आरए एण्ड आर जब ट्र्याकर म्यानपावर विरुद्ध परेको भेटिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार विसं २०६४ साउनपछिको..
​असई पदको अन्तिम रिजल्ट आयो, यसरी हेर्नुहोस् नतिजा
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले लिएको प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) पदको लिखित परीक्षाको अन्तिम नतिजा सोमबार सार्बजनिक भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७२ असार २३ गते असई पदमा बिज्ञापन प्रकाशित गरेको..
​कोरियन भाषा परीक्षाका लागि कहाँ–कहाँ तोकियो केन्द्र (सूचनासहित)
काठमाडौं । इपीएस शाखाले सातौं कोरियन भाषा परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्रहरु तय गरेको छ । भाषा परीक्षा असारको ४ र ५ गते हुँदैछ । पीपिएस शाखाले जारी गरेको सुचनाअनुसार काठमाडौंमा १८ वटा..
​युवालाई विदेश पठाउन बन्द गर्नुपर्छः गभर्नर नेपाल
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जिवी नेपालले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि युवालाई विदेश पठाउन बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। मिडिया इन्टरनेस्नलले आइतबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा गभर्नर गभर्नर नेपालले काम गर्ने..
​पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न शुक्लाफाँटादेखि रारासम्मको टुर प्याकेज
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटादेखि खप्तड हुँदै सुदूर र मध्यपश्चिमको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कर्णाली अञ्चलमा अवस्थित रारा तालको भ्रमणको गर्ने एक हप्ते टुर प्याकेजको व्यवस्था गरिएको छ। आजदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट मोहित टुर एण्ड..
​कृषि विकास बैंकले ६७ जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी माग्यो
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले आज गोरखा पत्र सुचना प्रकाशन गरी ६७ जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी माग गरेको हो । सूचनामा बैंकले लेखा अधिकृत ११ जना, कानुन अधिकृत १० जना,..
​लण्डनमा खुल्यो पहिलो नाङ्गो रेष्टुरेण्ट, जहाँ कसैले कपडा लगाउँदैनन्, क्युमा ४६ हजार ग्राहक
एजेन्सी । लण्डनको पहिलो न्याकेड रेष्टुरेण्टको शुक्रवार दक्षिण पूर्वी लण्डनको गोप्य स्थानमा खुलेको छ। जुन तीन महिनाका लागि मात्र खुलेको हो । 'बुनियादी' नामको यो रेष्टुरेण्टमा डेली मेलका दुई पत्रकारले ..
रिसेप्सनिस्टमा के–कस्ता गुण हुनुपर्छ ?
हरेक भएकै हुअफिसमा रिसेप्सनिस्टन्छन् । यो ट्रेन्ड विश्वमै छ । अफिसको ‘फ्रन्ट डेस्क’ मानिने रिसेप्सनमा युवती रिसेप्सनिस्ट राख्ने गरेको पाइन्छ । हरेक आगन्तुकका नजरमा रिसेप्सन अफिसको पहिलो इज्जत हो भने..
पोखरा विश्वकै सुन्दर र सस्तो पर्यटकीय गन्तव्य, प्रतिदिन १५.८४ डलरमा बस्न सकिने -फोर्ब्स
वासिङ्टन डिसी । विश्व प्रसिद्ध फोर्ब्स पत्रिकाले नेपालको पोखरालाई सबैभन्दा सस्तो पर्यटकीय गन्तव्य भएको उल्लेख गरेको छ। फोर्ब्सका अनुसार अमेरिकी डलरको स्थानीय मुद्रासँगको विनिमय दरलाई आधार मानेर यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको..
टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकमा जागिर खुल्यो
काठमाडौं । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकमा विभिन्न पदका लागि जागिर खुलेको छ । बैंकले अफिसर अथवा एसिस्टेन्ट अफिसर, व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थी र जुनियर एसिस्टेन्ट र जुनियर एसिस्टेन्ट प्रशिक्षार्थीका लागि दरखास्त आह्वान गरेको..
​तिजी पर्वमा अहिलेसम्मकै बढी विदेशी पर्यटक सहभागी
मुस्ताङ । उपल्लो मुस्ताङको सांस्कृतिक पर्व तिजीमा रमाउन अहिलेसम्मकै उच्च विदेशी पर्यटक पुगेको देखिएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप)ले वैशाख २१, २२ र २३ गते सञ्चालन भएको तिजी पर्वको..
सडकमा गीता गाएर रोजगारी पाइदैन, आत्मनिर्भर बन्नु पर्छ प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडकमा बसेर गीत गाउँदैमा बेरोजगारी समस्या समाधान नहुने बताएका छन् । उनले भने – “स्वदेशमा रोजगारी पाइन, रोजगारीका लागि बिदेसिनुको विकल्प रहेन भन्दै सडकमा..
​अब १ जना मात्रै कामदार भएको अफिसमा पनि श्रमिक अधिकार लागू हुने, विधेयक पारित गर्न सांसदमा
काठमाडौ । श्रम विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्नेमा सांसद र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले जोड दिएका छन् । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आजको बैठकमा सो विधेयकका सम्बन्धमा सांसद, विज्ञ, मजदुर, उद्योगीसँगको..
​निजामती कर्मचारीको निर्वाचनः एमाले निकट कर्मचारी संगठन पहिलो
काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा एमाले निकट निजामति कर्मचारी संगठन पहिलो भएको छ । माओवादी केन्द्र निकट कर्मचारी संगठन भने तेस्रो भएको छ । मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला..
हिमालय एअरलाइन्सले सुरु गर्‍यो काठमाडौँ-दोहा उडान
काठमाडौ । नेपाल-चीनको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित हिमालय एअरलाइन्स्ले काठमाडौं(दोहाको पहिलो सफल उडान सम्पन्न गरेको छ । मंगलबार त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट ११ बजे उडेर साढे १ बजे दोहास्थित हामद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा..
​प्रत्येक प्रदेशमा एउटा पर्यटकीय क्षेत्र बनाइने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ को बजेटमार्फत हरेक प्रदेशमा १र१ पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने घोषणा गर्ने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अर्थमा पठाएको प्रस्तावमा सातैवटै प्रदेशमा एक,..
​हिमालय एयरलाइन्सको नियमित उडान जेठ १८ देखि, पहिलो गन्तब्य दिल्ली नभई दोहा
काठमाडौँ । नेपाल–चीनको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित हिमालय एयरलाइन्सले आफ्नो नियमित उडान सुरु गर्ने भएको छ। यही मे ३१ तारिख अर्थात् जेठ १८ गतेदेखि कतारको राजधानी दोहालाई पहिलो गन्तव्य बनाउँदै एयरलाइन्सले..
Results 878: You are at page 21 of 30